News: नेपाली माछा बिक्री नहुदा चिन्तित किसान भन्छन्, ‘कर्मचारीको मिलेमतो नभए प्रतिबन्धित माछा कसरी भित्रन्छ ?'’
नेपाली माछा बिक्री नहुदा चिन्तित किसान भन्छन्, ‘कर्मचारीको मिलेमतो नभए प्रतिबन्धित माछा कसरी भित्रन्छ ?'’
shudeshna.smartkrishi@admin.com halokhabar.com 2021-11-21 30
कृषि प्रधान देश नेपालमा वर्षेनी कृषि वस्तुको आयात बढिरहेको छ । यसमा दुई मत छैन भने अर्को तर्फ नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कृषि वस्तु बिक्री नभएर किसान कृषि पेसा छोड्न बाध्य भइरहेका छन् ।
नेपालमा उत्पादन प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि भारतीय वस्तुले बजार कब्जा गर्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सडेर जाने गरेको छ । भारतीय कृषि वस्तुले विशेष गरेर नाका क्षेत्रका किसानहरू कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित हुनु परेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता मध्यविन्धु नगरपालिका ९ का किसान ईश्वर भट्टराईले ३५ बिघामा २ वर्षदेखि माछा पालन गर्दै आएका छन् । आफ्नै देशमा केही गर्ने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा लागेका ईश्वर यतिखेर माछा पालन व्यवसाय न निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । भर्खर माछा बिक्री गर्ने बेला भएको छ तर माछा बिक्री नहुँदा उनी चिन्तित छन् । भारतबाट अवैध रूपमा माछा भित्रँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको माछाले बजार नपाएको हो । भारतबाट आयात माछा एकदमै सस्तो छ भने नेपालमा उत्पादित माछा लागत खर्च नै बढी लाग्ने हुँदा महँगो पर्न जाने उनले बताए ।
नेपालले माछामासु आयात गर्न रोक लगाएको छ तर निर्बाध रूपमा भारतीय माछा मासु बिक्री वितरण भइरहेको छ । भारतबाट अवैध रुपमा माछा भित्रँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको माछा बिक्री नभएर व्यवसाय घाटामा गइरहेको उनले बताए । यस सिजनदेखि माछा बिक्री गर्ने समय भएको छ । तर सय टन माछा बिक्री भएको छैन ।
उनले सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा माछा आयात भइरहेको पनि बताए । ‘कर्मचारीको मिलेमतोमा नै माछा गाडीका गाडी आयात भइरहेको छ । नभए प्रतिबन्धित माछा कसरी आयात हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।
भारतबाट माछा आयात प्रतिबन्ध गर्नुका साथै कडा निगरानी गरी कडा भन्दा कडा कार्बाहि गर्नुपर्ने उनले माग समेत गरे ।
यता नवलपरासीकै कावासोती नगरपालिका १५ का अर्का माछा पालक किसान सागर गुप्ता पनि भारतीय माछाले बजार कब्जा गर्दा चिन्तित छन् । ६ वर्षदेखि माछा पालन गर्दै आएका उनले ६ बिघामा माछा पालन गरिरहेका छन् । वार्षिक १ करोड आम्दानी गर्ने गुप्ताले यो सिजनमा माछा बिक्री नभएर ४० लाख जतिको घाटा व्यहोर्नु पर्‍यो ।
भारतीय माछासँग आफूहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘माछा पालनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तु विदेशबाट आयात गर्नु पर्छ’ गुप्ताले भने,‘त्यस कारण हामीलाई लागत खर्चनै महँगो पर्न जान्छ । भारतीय माछासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ ।’
उपभोक्ताले सस्तो माछा खोज्छन् । नेपालमा उत्पादित होलसेल जिउँदो माछा २५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने भारतीय माछा १८० सम्ममा पाउँछ ।
‘उपभोक्ताले पनि माछाको गुणस्तर हेर्नुहुन्न । २र३ महिना फ्रिजमा हालेर केमिकल मिसाइएको मरेको माछा किनिरहनु भएको छ ।’ उनले भने,‘उपभोक्ताले पनि बुझेर स्वास्थ्य माछा खान थाले हामीलाई पनि केही राहत हुन्थ्यो । यो कुरा उपभोक्ताले पनि जान्न जरुरी छ ।’
यताका व्यापारीहरूले पनि भारतीय माछालाई नै प्राथमिकता दिने गरेको उनले बताए ।
‘व्यापारीले पनि तपाईँहरूको भन्दा उताबाट आयात माछा सस्तोमा पाइन्छ । कि तपाईँहरू मूल्य घटाउनु नभए हामी किन्दाकिन्दै भन्छन्’ उनले भने,‘यतिका खर्च गरेर उत्पादन गरेको माछा घाटा खाएर त बेच्न सकिँदैन नि ।’
साथै उनले अवैध भारतीय कृषि वस्तु आयात रोक्नुपर्ने, आयात बन्देज गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आयात गरेको पाइए कडा कार्बाहि गनु्र्र पर्ने साथै नेपालको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उनले माग गरे ।
नभए अहिले चलिरहेको पेसालाई छोड्न आफूहरू बाध्य हुने पनि उनले बताए । पोखरीको माछा जुन हिसाबले बिक्री हुनु पर्ने हो हिसाबले बिक्री नभए धेरै घाटा हुने उनको भनाई छ ।
आफ्नै देशमा कृषि क्रान्ति गर्ने उद्देश्यले कृषिमा लागे पनि नेपालमा त्यो अवस्था छैन । सरकारले बजारीकरणमा मात्र ध्यान द्रिए पनि धेरै किसानलाई राहत हुने उनको बुझाई छ ।
यता पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट महेशपुरका प्रमुख शोभा कर ज्ञवालीले पनि अवैध माछा आयातले नेपाली किसान मर्कामा परेको स्वीकार गरे । नेपालमा पशुपक्षीजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर खुला सीमाका कारण भारतबाट माछा मासु भने आयात भइरहेको छ ।
उनकाअनुसार नेपालमा मासुको मूल्य बढ्दा बिचौलियाहरूले मौका छोपी लुकिछिपी माछा आयात गर्ने गर्छन् । उनले भने,‘भारतमा माछाको मूल्य नेपालमानभन्दा सस्तो पर्ने भएकोले बढी मुनाफा कमाउनको लागि भारतीय माछा नेपाल ल्याउने गरेको पाइएको छ ।’
कर्मचारीको मिलेमतोमा भन्दा पनि खुल्ला सीमा भएका कारण अवैध आयात रोक्न नसकिने नले बताए ।
‘अवैध आयात हुन्छ त्यो रोक्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘पारीबाट वारी अवैध रूपमा बिक्रीको लागि ल्याएको हो कि आफ्नो घर ल्याएको हो केही थाहा पाइँदैन ।’
भारतीय माछा आयात रोक्न आफूहरू क्रियाशील रहेको दाबी पनि गर्छन् उनी । सम्भावित चोरी निकासी हुने क्षेत्रमा समेत पुगेर सुरक्षाकर्मीले दिनहुँ निगरानी गरिरहेको बताउँदै उनले हलोखबरसग भने, ‘सिमाना वारिसम्म अवैध रूपमा ल्याइएका माछा नष्ट गरिरहेकै छन् ।’आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को तीन महिनामा मात्र ५० केजी माछा नष्ट गरिएको छ । अवैध आयात रोक्न नेपालले उत्पादनमा ध्यान दिनुका साथै कतिपय नीति नियम नै परिवर्तन गर्नु पर्ने उनले बताए ।